6 Oct 2017 . 4:09 PM
ဘာလို႔ ေလယာဥ္အမ်ားစုက အျဖဴေရာင္ျဖစ္ေနၾကတာလဲ၊ တကယ္ေတာ့ အျဖဴေရာင္ဟာ သူတို႔ရဲ့ မူလအေရာင္မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ဒီလို အျဖဴေရာင္ျဖစ္ေနဖို႔အတြက္ ေလယာဥ္ကုမၸဏီေတြဟာ ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ေဆး ၆၅ ဂါလန္ေလာက္သံုးျပီး သုတ္ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ! ဘာလို႔ ဒီလုိ သုတ္ၾကရပါသလဲ။
Why planes are white
Here's why most planes are white.
Posted by Business Insider on Thursday,5October 2017
လေယာဉ်အများစုက ဘာလို့ အဖြူရောင်ဖြစ်နေကြတာလဲ
ဘာလို့ လေယာဉ်အများစုက အဖြူရောင်ဖြစ်နေကြတာလဲ၊ တကယ်တော့ အဖြူရောင်ဟာ သူတို့ရဲ့ မူလအရောင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဒီလို အဖြူရောင်ဖြစ်နေဖို့အတွက် လေယာဉ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ လေယာဉ်တစ်စင်းကို ဆေး ၆၅ ဂါလန်လောက်သုံးပြီး သုတ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ! ဘာလို့ ဒီလို သုတ်ကြရပါသလဲ။
လေယာဉ်တွေကို အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် အရောင်ဖျော့ဖျော့သုတ်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နေရောင်ကို အလင်းပြန်စေဖို့ပါ။ ပြီးတော့ နေရောင်ခြည်က လာတဲ့ အပူဓာတ်နဲ့ Solar Radiation ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ ပျက်စီးမှုတွေကို နည်းအောင်လို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာနဲ့ အခြေခံအားဖြင့်တူလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နေရောင်ထဲ ထွက်တဲ့အခါ Sunblock တို့၊ Suncream တို့ လိမ်းတာနဲ့ အလားတူပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် နေသာတဲ့နေ့မှာ အမည်းရောင်လို အရောင်ရင့်ရင့်ဝတ်သွားမိရင် အဖြူရောင်ဝတ်တဲ့နေ့ထက် ပိုပြီး ပူတာကို ခံစားရသလိုပေ့ါ။ လေယာဉ်ကို အပူလျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ထားတာဟာ လေယာဉ်ကိုအေးမြစေဖို့ ကုန်ကျတဲ့ စရိတ်ကို လျော့ချနိုင်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအဖြူသုတ်တာဟာ ငွေကုန်သက်သာအောင်လုပ်တာ တစ်ခုတည်းရယ်မဟုတ်ပါဘူး။
နေရောင်ခြည်အလင်းကနေ ကာကွယ်ဖို့ အရောင်ဖျော့ဖျော့ထားပြီး အလင်းပြန်အောင် လုပ်ရတဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပလတ်စတစ် ဒါမှမဟုတ် Composite Materials (Carbon fiber ၊ Fiberglass တို့လို) ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ လေယာဉ်ဦးပိုင်းကိုလည်း တည်ဆောက်ထားပြီး Radar ရှိတဲ့အတွက် ဖောက်ထွင်းမြင်လွယ်စေဖို့အတွက်လည်း အဖြူရောင်ကို သုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်မီလေယာဉ်ပျံတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်ခန်းမျက်နှာပြင်တွေဟာလည်း Composite Materials နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့သုတ်လိမ်းထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ လေယာဉ်ကို တခြားအရောင်တွေ မသုတ်ရဘူးလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အနီရောင်စတဲ့ အရောင်တွေ သုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တစ်ခုကြာပြီးနောက်မှာ နေရောင်နဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် အရောင်ပြယ်လွင့်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့လေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ ဘာဆေးမှ မသုတ်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ လေယာဉ်တွေကို ဘာဆေးမှ မသုတ်ဘဲ သတ္ထု အရောင်အတိုင်းထားခဲ့ကြတဲ့အတွက် နေရောင်ကို ကာကွယ်မှုမရှိဘဲ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သတ္ထုအရောင်မှေးမှိန်လာခြင်းကိုကြုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတ္ထုတွေ ပြန်လည်တောက်ပြောင်စေဖို့ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ခံပြီး ခဏခဏ အရောင်တင်ပေးရတော့တာပါပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ အခုခေတ်လေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ လေယာဉ်အများစုကို အရောင်ဖျော့ဖျော့သုတ်ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။